ဥရောပမှာအများစုကရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာအများစုကရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားနော်ဝေး, Train Travel စကော့တလန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 29/12/2019)
ရထားယူပြီးဥရောပရဲ့အများဆုံးသာယာလှပဒေသများတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အံ့မခန်းတောင်များခံစားကြည့်ပါ, ရေကန်များ, ရှုခင်းများမြစ်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် Feat - ဤရွေ့ကားအဆိုပါများမှာ ဥရောပတိုက်တွင်အများစုမှာရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း.
အနောက်အဘိဓါန် Highland လိုင်းရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း, စကော့တလန်
လူအားလုံးတို့သည်သင်္ဘော Hogwarts Express ကို! အဆိုပါ 264km ခရီးအများစုမှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြေရိုင်းလွင်ပြင်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းပေးတစ်ခုတည်းလမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်, Loch, ဟယ်ရီပေါ်တာမှော်တစ် dash ဖြည့်စွက် - - ထို Hogwarts Express ကိုအသုံးပြုတဲ့ Glenfinnan viaduct အရှိဆုံးဝေးလံသောဗြိတိန်မှာဘူတာနှင့်အချို့.
ခရီးစဉ်: ပဲရစ် သို့ nice
Cue ရွှံ့-tile ကို-မိုးကျေးရွာပေါင်း, သပ်ရပ်စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အပြာရေ!
စာရင်းတစ်ခု ဥရောပအတွက်အများစုမှာရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း တောင်-of ပြင်သစ်မပါဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ဒါဟာသူ့ရဲ့အလှအဘို့အကျော်ကြား, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းလုပ်အံ့သြစရာမရှိပါင်. ပဲရစ်စတင်ခြင်း, သင်နေကြာနေနှင့် Provence ၏လာဗင်ဒါလယ်ကွင်း ကိုယ့်နှစ်နာရီအကြာ. သင်သည်သင်၏ဝတ်စုံထုပ်ပိုးသေချာအောင်လုပ်ပါ, '' စေပြင်သစ် Riviera နွေရာသီအတွက်သင်တက်သွားချင်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ.
ပဲရစ် Nice ရထားမှ
Nice ရထားမှ Avignon
ကနေသူ့ရဲ့လမ်းကိုအတိုင်းမြစ်ရိုင်း၏ခါးဆစ်ကိုလိုက်နာပါ Koblenz Mainz မှ. ကိုယ်ကသာနေတဲ့ငါးဆယ်မိနစ်စီးနင်းင်, ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်းတလျှောက်, သင်မြင်ပါလိမ့်မယ် ရဲတိုက် နှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုမြစ်ရဲ့တောင်စောင်းဖက်တွယ်. ဒါဟာတကယ်တစ်ဦးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ထဲကတစ်ခုခုတူ!
ဘာလင် Koblenz မှရထား
Koblenz ရထားမှ Frankfurt
အတွက်နံနက်စာ မြူးနစ် ဗင်းနစ်နှင့်ညစာစားပွဲ
3 နိုင်ငံပေါင်း,3အမြင်များ x. မှမြူးနစ်ကနေရထားပေါ်တွင်ဤနေရာသို့သွားရန် ဗင်းနစ် နှင့်သောက်ရ3အံ့မခန်းအမြင်များတန်ဖိုးရှိနိုင်ငံများ. ဒီမျဉ်းအလှဆုံးတောင်များအချို့မှတဆင့်ပြေး, မြစ်များ, သြစတြီးယားနှင့်အယ်လ်ပိုင်းကျေးရွာများ, ဂျာမနီ, နှင့်အီတလီ. 3-၏ in1 အဆိုပါ ဥရောပတိုက်တွင်အများစုမှာရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်ခြင်း.
သငျသညျမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေခဲ့လျှင် အဖြစ်လူစည်ကားမဟုတ် ရိုင်းဘက်မှာနှင့်ပိုပြီး, သို့ဖြစ်လျှင်ဤခရီးစဉ်ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာစတင်ခြင်း, အဆိုပါညား fjordland လျင်မြန်စွာမတ်စောက်သောကမ်းပါးမျက်နှာများနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြေ Meadows လမ်းပေး. တောင်တက်ဖိနပ်ထုပ်ပိုးရန်သေချာစေပါ, ရထားတော်တော်များများဦးတည်ရာမှာရပ်နေသောကြောင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း.
ဥရောပတိုက်တွင်ရှုခင်းသာရထားခရီးများထွက်၏ဤ post ကိုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါ Glacier အမြန် boarding!
စိန့်. Zermatt မှ Moritz. 8 စင်ကြယ်သောသာယာလှပချမ်းသာနာရီ. ဒါဟာမချေါမယ့် ရေခဲမြစ် Express ကို အချည်းနှီး. ရထားလမ်းကြောင့်ဥရောပသားဒါမြင့်မြတ်တဲ့ရှုခင်းကတဆင့်ခရီးသွားခြင်း (ယင်းနှင့်အတူ Bernina) တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ; ဒါကြောင့်လည်းအားကြီးသော Rhone နှင့်ရိုင်းမြစ်ချောင်းများ၏ headwaters မှအိမ်ပြန်မယ့်.
ဇူးရစ် Zermatt မှရထား
ဂျီနီဗာ Zermatt မှရထား
Zermatt ရထားမှ Bern
Lucerne Zermatt မှရထား
ဒါကြောင့်ယခုသင်ဖတ်ရှုခြင်းအမှုကိုပြုဖြစ်ကြောင်း, သငျသညျဥရောပ၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သာယာလှပရထားခရီးစဉ်များလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးများ ရထားခရီးသွားလက်မှတ်, ဈေးအပေါဆုံးနှုန်းမှာ, အများအပြားငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာ.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fscenic-train-trips-europe%2F%0A - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#သာယာလှပ #View #Europe longtrainjourneys ရထားခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား